Ukuvezwa kwBhantshi lezikhali laseNingizimu Afrika
The Unveiling of the South African National Coat of Arms
Uma iNingizimu Afrika ingumuntu, ijazi lezikhali lizolingana nesignesha. Isigqoko sezikhali sibonisa isitembu esisemthethweni noma uphawu ezincwadini zomthetho, njengesitifiketi sakho sokuzalwa. Ingasetshenziswa futhi njengebheji ezakhiweni zikahulumeni futhi njengesibonakaliso sezinhlamvu zemali ukubonisa ukuthi ziyiqiniso futhi zisemthethweni eNingizimu Afrika.
I-National Coat of Arms yenziwe ngamatshwayo amaningana, ngayinye enencazelo ethize, ehlanganisa ndawonye ukutshela indaba yaseNingizimu Afrika.
Ngenkathi i-Coat of Arms entsha ivuliwe okokuqala e-Kwaggafontein ngomhlaka 27 Ephreli 2000, uMongameli uThabo Mbeki wanikeza le nkulumo:
"Namuhla, ngosuku lwethu lweNkululeko, nathi sihlangene lapha ukubona Yombili iNingizimu Afrika ne-Afrika. Yombili i-Afrika neyonke. Isebenza ekukhuliseni kwethu esidlule, isikhathi sethu esiphilayo kanye nekusasa lethu njengoba liqhubeka phambi kwethu. Imelela ukuthi abantu baseNingizimu Afrika bayaziwa njalo.
Ngalesi siKhwama esisha seMpi, sihlonipha esidlule. Sifuna ukwamukela izinhlelo zenkolo zabantu bomdabu, ngokubonisa inhlonipho yethu ngobuhlobo phakathi kwabantu kanye nemvelo. Ikhumbula izikhathi lapho abantu bethu bakholelwa ukuthi kwakukhona amandla aphezu kwemvelo ehlanganisa abaphilayo nabafileyo. Ikhokha intela ezweni lethu kanye nezwekazi lethu njengesizalo somuntu, njengendawo lapho kuqala khona ukuphila komuntu.
Isithombe esisekuqaleni sengubo yethu entsha yezingalo yinyoni enobungqungquthela enamaphiko aphakanyisiwe. Lo mvikeli omkhulu uyinyoni ebulala izinyoka ngakho-ke isivikela ngokumelene nalabo abangasilimaza. Ngaphezulu kwenyoni yilanga elinyukayo, amandla anika impilo ngenkathi emele ukukhanya kobumnyama nokunqoba kokutholakala, ulwazi, ukuqonda izinto ezifihlekile, ukukhanyisa futhi impilo entsha ezayo - entsha yethu isizwe njengoba izalwa futhi iguqukela.
Ngezansi le nyoni, i-protea, umdabu wezwe lethu elimelela ubuhle, ukuvumelanisa ukuhleleka kwamasiko ethu, ukuqhuma kwethu njengesizwe njengoba sikhula ngokuya elangeni.
Izindlebe kakolweni ziyizibonakaliso zokuzala ezweni lethu elihlinzekele abantu bethu iminyaka eyizinkulungwane njengoba kuzokwenza njalo. Izindwangu zezindlovu zase-Afrika, ezakhiwe ngezibili ukumelela amadoda nabesifazane, zifanekisela ukuhlakanipha, ukuqina nokuqina.
Esikhathini sikhungo sibheke isihlangu esikhombisa ukuvikelwa kokuvela kwethu esizukulwaneni esisodwa. Ngaphezulu kwalo, uphumule umkhonto kanye ne-knobkierie. Ngokubambisana, lokhu kuhlanganiswa kufakazela ukuvikela ukuthula kunokuba kube yimpi yezempi. Lesi sihlangu sokuthula, esibonisa futhi idrama yaseAfrika, ngakho-ke, ngesikhathi esifanayo, sidlulisela umlayezo wabantu abathintekayo ngothando lenkambiso, ingxenye yayo ephakeme njengesihlangu esivela ngeso lengqondo yi-protea.
Okuqukethwe ngaphakathi kwesihlangu kungenye yezethulo zokuqala zomuntu emhlabeni. Labo ababoniswa, ababengabahlali bokuqala bezwe lethu, abantu baseKhoisan, bakhuluma ngokuzibophezela kwethu ukugubha abantu nokuthuthukisa imbangela yokugcwaliseka kwabo bonke abantu ezweni lethu nasemhlabeni wonke. Lezi zithombe zitholakala ezithombeni eLithon Stone, isibonelo esidumile emhlabeni se-South African Rock Art. Zibonakaliswa ngesimo sengqondo sokubingelelana, kubonisa ukuguqulwa komuntu ngamunye kube yintando yenhlalakahle engowomuntu ohlangene futhi ongathandeki. Isiqubulo se-Coat of Arms yethu entsha, ebhalwe ngolimi lweKhoisan yabantu/abantu base-Xam, lisho: abantu abahlukahlukene bahlangana noma abantu abahlukene bahlangana ndawonye. Sithole ulimi lwabantu basendulo.
Lolulimi seluphelile ngoba akekho ohlala kulo okhuluma njengelulwimi lwakhe. Lokhu kugcizelela inhlekelele yezigidi zabantu eziye zabhubha futhi zaphela ukuba zikhona njengezizwe, ngenxa yobubi babantu kwabanye. Kubuye kuthi thina, thina ngokwethu, angeke sibe ngumuntu ngokugcwele uma kukhona abantu abaqothulwa ebusweni bomhlaba ngoba ngamunye wethu uyinhlayiya yonke ephelele. Ngokufaka amagama lawa kwiCat of Arms -! Ke e: / xarra // ke - sizinikela ekubalukeleni ukuphila, ukuhlonipha zonke izilimi namasiko nokuphikisa ukucwasa ubuhlanga, ubulili, ukuhlukunyezwa nokuhlukunyezwa.
Ngakho-ke siyathembisa ukuhlonipha isibopho esithweswe ukuziphendukela kwemvelo - ukuhlonipha iqiniso lokuthi kuleli zwe esilizuze njengefa lizotholakala enye yezindawo zokuzalwa zabantu. Lapha ngolimi lwangesikhathi esidlule, sikhuluma nezizukulwane ezikhona kanye nalabo abasazoqala ukubaluleka kokubambisana nobunye bomuntu.
Sithi enhliziyweni yabo bonke abantu abahlala isidingo sangaphakathi, isintu esibalulekile esicindezela umuntu ngamunye, abantu ngabanye, ukuba bahlangane nomunye. Lesi sinyathelo kanye nalesi senzo esiqaphelayo sisenza ukuthi singobani futhi sisitshela ukuthi siphi abantu baseNingizimu Afrika abafuna ukuhamba. Umklamo uhlanganisa izithombe zeqanda, okufanekisela ukukhiqizwa okuphakade kokuphila. Kuyinto ukuhamba phambili okumele kusisithinte e-African Century nasekunqobeni ukuvuselelwa kwe-Afrika.
Ngiyanicela bonke ababuthene lapha namhlanje ukuba bavume le Mpahla Yezikhali njengabo, ukuba babe nabo njengezinto ezivamile, ezimele izifiso zomhlaba ophumelelayo owazi izinselelo ezizayo futhi unethemba lokukwazi anqobe izinkinga zayo.
Njengoba ihlombe lethu liziqhenya ngokuziqhenya, livusa umoya omkhulu wokuzibandakanya kobuzwe, ngakho-ke kumele le Nqobo yezikhali, ezibonisa ukudala okungavamile kwabantu bakithi, zikhuthaze isizwe sethu esihlangene nesihluke ukuzama ukukhanya ngokugqamile njengelanga." - Thabo Mbeki